Saacadda xiddigiska: waa maxay, sifooyinka, hawlgalka iyo xiisaha | Saadaasha Shabakadda
Jarmal Portillo | 11/02/2021 12:44 | Kala bixid
El saacadda xiddigiska magaalo waa mid ka mid ah meelaha ugu dalxiiska badan dalxiiska tan iyo markii ay leedahay taariikh iyo shaqo weyn. Tusaale ahaan, booqdayaasha Prague, saacadda xiddigiska ayaa ka mid ah meelaha ugu booqashada badan. Sheekooyinka la sheegay waxaa ka mid ah kuwo aan caadi ahayn.
Sidaa darteed, waxaan u hibeyn doonnaa maqaalkan si aan kuugu sheegno dhammaan taariikhda iyo astaamaha saacadda xiddigiska.
1 Saacadda xiddigiska oo awood u leh inay soo bandhigto waqti
2 Awoodda saacadda xiddigiska
3 Xiisaha qaar
Saacadda xiddigiska oo awood u leh inay soo bandhigto waqti
Taariikhda saacadda xiddigiska Prague waxay leedahay faahfaahin badan oo gebi ahaanba aan caadi ahayn. Tusaale ahaan, mid ka mid ah ayaa ah inay gaareen sayidkii dhisay saacad si uusan u abuuri karin mid kale oo sidaas ah. Waxaa jira kuwa rumaysan in ay tahay amulet u adeegta in dhammaan muwaadiniinta lagu ilaaliyo nabadgelyada oo dhan. Maaddaama tiknoolajiyaddu ay sii socoto iyo xaqiiqda khuraafaadka qaarkood ee taariikhda la soo helay, waxaan uga tagnay sheekooyinkan inaan diiradda saarno sida ay u shaqeeyaan. Weli sannado ayuu dhaafay, Qeybaha saacadda xiddigiska ayaa wali xiiso u leh qof kasta oo jecel nidaamyada analogga ah.
Waana inay tahay saacad awood u leh inay muujiso waqtiga siyaabo badan. Naqshadeynta ayaa ah a astrolabe waxayna ka kooban tahay 3 farshaxan oo awood u leh calaamadeynta 5 daqiiqadood oo isku mar ah. Haddii aan eegno qaybta kore waxaan arkeynaa tiyaatarka caruusadaha oo kuyaala inta udhaxeysa laba indhoole oo 12ka rasuul lagu sawiray. Mid kasta oo iyaga ka mid ah ayaa baxa 60kii daqiiqaba si uu u muujiyo waqtiga ay tahay. Tirooyinku way ka casrisan yihiin saacadda, in kasta oo ay soo jireen qarnigii XNUMXaad. Taas macnaheedu waa in tirooyinka la soo saaray abuuristooda ka dib.
Guntiisa hoose waxaan ku leenahay kalandar leh sawirro bilaha iyo xilliyada. Sidoo kale, tilmaam waa Saint-ka maalin kasta oo sanadka ah. Labada dhinacba waxay leeyihiin xiiso farshaxan oo soo jiidata kumanaan dalxiisayaal ah Prague sanadba sanadka ka dambeeya. Dahabka saacaddani waa jirka dhexe maadaama uu ahaa gabal asal ahaan loogu talagalay 1410.
Awoodda saacadda xiddigiska
Waana in saacadani ay tahay mid aad u xiisa badan tan iyo markii ay awood u leedahay inay ku muujiso waqtiga shan siyaabood oo kala duwan. Nidaamkeeda gabalku waa mid aad u xiiso badan. Waxaan faahfaahin doonnaa mid kasta oo iyaga ka mid ah. Dhinaca kale, waxaan haysannaa qorraxda dahabiga ah ee ku wareegeysa wareegga zodiacal. Qaybtani waxay awood u leedahay inay na tusto saddex saacadood isla waqti isku mid ah. Tilmaamaha ugu horreeya waa booska gacanta dahabka ah. Waxay ku taalaa tirooyinka Roomaanka waxayna noo sheegtaa waqtiga Prague. Markay gacantu dhex marto khadadka dahabiga ah, waxay tilmaamaysaa waqtiga qaab saacado aan sinnayn ahayn. Ugu dambeyntiina, markay marayaan giraanta dibedda, waxay calaamadeeyaan saacadaha ka soo baxa qorraxda marka loo eego waqtiga Bohemian.
Awoodda kale ee saacadda xiddigiska ayaa ah in la muujiyo waqtiga u dhexeeya qorrax ka soo baxa iyo qorrax dhaca. Nidaamka lagu muujinayo waqtigan waxaa loo qaybiyaa 12 "saacadood". Si tan loo sameeyo, isticmaal masaafada u dhexeysa qorraxda iyo bartamaha wareegga. Waa in lagu xisaabtamo in cabbirkani isbadalayo sanadka oo dhan, maadaama oo maalmaha oo dhami aanay isku dherer ahayn. Markii aan ku soo dhowaanno xilliga kuleylaha, waxaan haysannaa maalmo dheeri ah oo waqtiga u dhexeeya qorrax-u-soo baxa iyo qorrax-dhaca waa ka dheer yahay. Taas bedelkeeda, markaan ku jirno xilliga qaboobaha waxaan leenahay dherer gaaban oo u dhexeeya qorrax ka soo baxa iyo qorrax dhaca.
Ta saddexaad, cirifka kore ee saacadda xiddigiska waxa ku jira lambarro ku qoran farcanka Schwabacher oo ku jira dahab. Lambarradan ayaa mas'uul ka ah inay muujiyaan shaqooyinka sidii loogu qabtay Bohemia oo waxay billaabaysaa inay calaamadeyso 1 fiidnimo. Si ay ula jaanqaadi karto waqtiga qoraxda, siddooyinku way dhaqaaqaan sanadka oo dhan si markaa si sax ah loogu qiyaaso.
Dhinaca kale, waxaan haynaa giraanta zodiac. Waxay mas'uul ka tahay inay muujiso meesha qorraxdu ugu jirto qorrax-dhaca. Dayax madoobaadka wax kale ma aha ee waa meertada uu dhulku ugu wareego qorraxda. Waa khadka ay ka socoto tarjumaadda dhulka. Amarka giraanta loo yaqaan 'zodiacal ring' ayaa lagu sharaxay inuu yahay aasaaska diyaaradda elliptical. Xaqiiqda caadiga ah ee laga helo saacad kasta oo xiddigiska ah. Dhaqdhaqaaqa wuxuu kuxiranyahay diskka dhaqaajinaya giraanta zodiacal.
Amarka giraantan ayaa loo aaneynayaa iyadoo la adeegsanayo ilaalin muuqaal ahaaneed ee diyaaradda ecliptic. Pole-ka Waqooyiga waxaa loo isticmaalaa saldhigga diyaaraddaan. Waxay umuuqataa inay tahay qayb qariib ah, laakiin waa qaabaynta laga helo inta badan saacadaha xiddigiska. Ugu dambeyntii, mid ka mid ah xiisaha ayaa ah taas waxaa jira dayax gacmeed dayaxa oo ina tusaya wejiyada dayax gacmeedkeena. Dhaqdhaqaaqa halkan wuxuu la mid yahay saacadda weyn laakiin xoogaa dhaqso ah. Inta badan caannimada ee saacadda xiddigiska guulaha waxay ku taal jirka dhexe.
Xiisaha kale ee jira ayaa ah inay ka kooban tahay saxan taagan oo ku yaal bartamaha iyo dhowr saxanno wareeg ah oo gebi ahaanba si madax bannaan u shaqeeya. Soo koobid ahaan, waxaan u aragnaa inay leedahay giraan zodiacal ah iyo cirifka kore ee lagu qoro qaababka Schwabacher. Waxa kale oo ay leedahay saddex cirbadood: mid ka mid ahi waa gacanta, gacanta labaadna waa qorraxda ka soo gudubta kor ilaa hoos, iyo ta saddexaad oo ah barta xiddigta oo ku xidhan giraanta zodiacal.
Maanta waxay noqon kartaa nidaam si fudud u fudud muuqaal ahaan laakiin maalintiisii ​​waxay ahayd faneed farsamo. Waxaan ka hadlaynaa in qaybtii ugu horreysay la dhisay sannadka 1410 mana jiraan wax intaa ka badan oo la barbardhigi karo tikniyoolajiyadda xilligaas iyo tan hadda. Waa in la ogaadaa in nidaamka farsamadu uu aad u gaabis yahay oo ay tahay wax aan macquul aheyn in lagu qiimeeyo dhaqdhaqaaqa isha aadanaha waqtiga dhabta ah. Haddii aan rabno inaan aragno dhaqdhaqaaqa saacadda xiddigiska waa inaan diiwaangelino ka dibna aan horay u sii socono. Waxa kale oo jira noocyo kumbuyuutar ah oo aan ku sameyn karno tijaabooyin kala duwan si aan u aragno sida ay u socoto iyo sida ay u shaqeyso.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Kala bixid » Saacadda xiddigiska